Ukudonsa ompompi basekhishini kuyathandwa emakethe yasekhaya eminyakeni eyisikhombisa noma eminingi edlule. Kuyinto nezimo kakhudlwana futhi ihlanganisa uhla ebanzi ukwedlula ompompi bendabuko. Njengoba igama liphakamisa, umpompi wasekhishini uyasetshenziswa ekhishini ukufanisa usinki. Ukushintshwa kombala kompompi wasekhishini kusondele eduze ...
Umpompi wasodongeni ukungcwaba ipayipi lokuhambisa amanzi odongeni, bese uqondisa amanzi kubhasi wokuwasha noma ucwile ngezansi ngompompi wasodongeni. Umpompi uzimele, kanti indishi yokugezela / usinki nawo uzimele. Isitsha sokugezela noma usinki akudingeki ukuthi ubheke inhlanganisela yangaphakathi nefau ...
Imindeni eminingi ayijwayele ukusebenzisa amathini kadoti ashumekiwe futhi inomuzwa wokuthi udoti osekhabhinethi unambitheka kamnandi. Kodwa ingabe udoti unuka kabi ekhishini? Noma lokhu kunqatshelwa kusekelwe ekungakhiphi udoti isonto lonke? Ngaphandle kwalokho, ngokuvamile kunezembozo kukhabethe. Ukuhlanza ngesikhathi esifanele ...
Izingxenyekazi zekhishi zeKhabhinethi Yekhishi
Ikhabethe lekhabethe lekhabethe lihlukaniswe laba yi-hardware eyisisekelo ne-hardware esebenzayo. Esokuqala yigama elijwayelekile leqembu le-hinge ne-slide rail, kanti elokugcina yigama elijwayelekile lehardware esetshenziswe ngqo efana nokudonsa isitoreji. Ikhishi eziyisisekelo ihardware eyisisekelo ngokuvamile ifaka phakathi: h ...
Uma kuqhathaniswa nendishi yendabuko yokugeza i-ceramic, lolu hlobo lwendishi yokuwasha alugcini nje ngokubonakala okukhanyayo okukhazimulayo nombala ogqamile, kodwa futhi lunokukhanya okukhanyayo okucacile, okucacile okukhazimulayo nokunaminyene kwengilazi, okungekho lula ukondla amabhaktheriya futhi kunezinzuzo zokuhlanza okulula . Ngakho-ke, ...
Ungayikhetha Kanjani Ionic Shower Bar？
Amakhanda we-shawa we-Negative athandwa kakhulu phesheya. Uyazi ukuthi angakanani amakhanda e-ion eshaweni angalungile? Uyini umsebenzi oyingqayizivele wenhloko yeshawa ye-ion engakhi? Ake ngiyethule kuwe namhlanje. Ishawa i-ion Negative ukufaka amatshe we-Maifan, i-tourmaline nezinhlayiya ze-ion ezingekho emgodini wokungena kwamanzi ...
Kungani Uthanda Shower Engagqwali?
Ishawa engenazinsimbi ingenye yezihlambi ezisetshenziswa kakhulu empilweni yethu yansuku zonke. Ngenxa yokuthi insimbi engagqwali inezici eziningi, imindeni eminingi izimisele ukusebenzisa ishawa lensimbi. Ngaphezu kwalokho, yiziphi izinzuzo zeshawa lensimbi engagqwali? Ake sichaze izinzuzo ezingenasici ...
Uhlobo Lohlobo Ngalunye Lwe-Countertop
Uma ufuna ukusebenzisa iKhabhinethi isikhathi eside, i-countertop ibaluleke kakhulu! Itafula lekhabethe eliqinile, eliqinile futhi elihle lizosenza sizizwe singaphansi kabi lapho sipheka. Kodwa abangane abaningi abazi okuningi mayelana ne-countertop yeKhabhinethi, futhi kaningi abazi ukuthi bangakhetha kanjani. Namuhla, ake ...
Ukwahlukaniswa Komnyango WeKhabhinethi
Iminyango yeKhabhinethi ihlukaniswa ngezinto ezibonakalayo: iphaneli yokuhlobisa ephindwe kabili, ipuleti elibunjiwe, ipuleti lokubhaka ngopende, umnyango wensimbi yekristalu, ipuleti le-acrylic kanye nensimbi eqinile yokhuni. Iphaneli yokuhlobisa kabili, okungukuthi, ibhodi le-melamine, i-substrate imvamisa kuyizinhlayiyana zebhodi, futhi ingaphezulu liyi-melamine veneer. Izinzuzo: t ...
Kungani Sithanda Itshe LeSintered?
Izingxenye eziyinhloko zetshe elikhonjisiwe yimpuphu yamatshe yemvelo nobumba. Ngokuyinhloko, kungamatshe aminyene. Idutshulwa ngo-10000 ton cindezela uhlelo ekushiseni okuphezulu ngaphezu kwe-1200 ℃. Ziyini izinzuzo zetshe le-sintered? Ar Gqoka ukumelana nokumelana nokugqwala Ubulukhuni be-Mohs o ...
Ukuqhathaniswa kwe-Countertop yeKhabinethi ehlukile
Amatafula abanye abantu akhanya futhi ahlanzekile njengamasha iminyaka eyishumi. Kungakhathaleki ukuthi zingamatafula asemkhathini futhi alula ombala wokukhanya noma amatafula ombala amnyama azolile nenhle, ukugxila ekutheni amelana nenhlabathi akuyona yini umbala, kodwa okokusebenza. Kusukela ngo-2012 kuya ku-2019, abantu abaningi ...
Ivinjiwe futhi Isikhunta eKithen Cabinet
Indle yasekhishini iyavalwa futhi idonswe phansi. Ipayipi lendle lesinki lasekhishini liyavalwa, okuyinkinga ejwayelekile. Ngemuva kokuvalwa kwepayipi, kufanele ibhajwe ngokushesha, ngaphandle kwalokho kuzodala ukugcwala kwendle. Ipayipi lendle liyavalwa. Ngokuvamile, indololwane ivinjiwe, okungukuthi, i-p ...